Daawo Xaalad halis ah oo laga soo sheegayo markab kiimiko sida oo lagu haysto Puntland – SBC
Daawo Xaalad halis ah oo laga soo sheegayo markab kiimiko sida oo lagu haysto Puntland
Posted by editor on September 24, 2011 Comments
Kooxaha shufto badeeda Soomaaliya ee afduubka u haysta markabka MV Iceberg 1 ayaa sheegay in shaqaalaha markabkaasi ay ku jiraan xaalad halis ah oo dhanka caafimaadka ah, taasi oo ka dhalatey markabkaasi oo ay sheegeen in uu sido sun iyo kiimiko.
Markabkan oo ay qabsadeen kooxaha burcad badeeda 29-kii bishii March 2010 ayaa lagu haystaa xeebaha deegaanka Garacad ee gobolka Mudug ee Puntland waxaana burcad badeedu ay sheegeen in markabku uu sido kiimiko la qarinayo.
Shaqaalaha lagu dul haysto markabkaasi ayaa tiradoodu horey waxay u aheyd 24 laakiin 29-kii bishii October 2010 ayaa mid ka mid ah shaqaalaha oo lagu magacaabi jirey Wagdi Akram ayaa is diley ka dib markii uu isku tuuray, waxaana wali lagu haystaa markabka oogadiisa shaqaalihii kale.
Nin ka mid ah kooxaha burcad badeeda ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in shaqaalaha markabka saaran ay la soo gudboonaatey xaalad halis ah dhanka caafimaadka taasi oo uu ku macneeyey kiimada uu sheegay in markabku sido.
Ninkan oo sheegtey in uu yahay afhayeenka burcad badeeda magaciisana ku soo koobay Aadan wuxuu sheegay in ay ku siideyn karaan markabka lacag madaxfurasho ah oo gaaraya 8 milyan oo doolar.
“Waxaynu ka dooneynaa markabka 8 milyan oo doolar maadama uu sido kiimiko, markii markabka aynu qabsanay ninka iska leh wuxuu u sheegay shaqaalaha inay ka degaan markabka oo ay ka baxsadaan isagoo diidanaa in aduunyadu ogaato sunta markabku uu sido” ayuu yiri Aadan.
Shaqaalaha haatan lagu dul haysto markabka ayaa kala ah 8 Yemeniyiin ah, 6 Hindi ah, 4 Ghana u dhalatey, 2 Suudaan u dhalatey, 2 Pakistaani ah iyo hal qof oo u dhashay Filipiin, waxaana burcad badeedu ay sheegeen in shaqaalaha ay ku sugan yihiin xaalad halis ah isla markaana aanay cuntada cuni karin, isla markaana miisaankoodu jireed uu isdhimayo.
Halkan ka daawo shaqaalaha markabka oo ku calaalaya in la siidaayo.
Dhamaan waxaan leeyahay dhalinta isu xilsaartay ilaalinta badooda waad kumahadsantihiin talaabada markabkaan kiimikada sida.waxaanse idinka dalbayaa inaad kan naftiina kudaahirisaan kuna bedeshaan madaxfurashada maxkamad caalami ah oo aad uqabataan cadawgeena nolosheena iyo kaluunkeena sumaynaya una bandhigtaan saxaafadda caalamka in maalin walba saa loogu qubo taninana kamidtahay mid aad isu xilsaarteen ayna tahay shaqa aad dalkiina iyo dadkiina uhaysaan (xirsixuseen4@hotmail.com)